Izindaba Umphakathi, Nefilosofi
Phenomenology njengoba zefilosofi sibonga zamanje sekuvele ukuthi ubuqambi wesazi sefilosofi German Husserl Edmuna ukuthi mqondo kwi-mathematics ne ukusebenza kule nsimu, kancane kancane esikhundleni izithakazelo esivuna ifilosofi nesayensi. imibono yakhe kwamiswa bedle zefilosofi ezifana Bernard Bolzano futhi Franz Brentano. I lokuqala babecabanga ukuthi iqiniso likhona, yize lubonakaliswa noma cha, futhi kuba lo mbono Husserl kwaphoqa isifiso wokuqeda ulwazi kwengqondo.
I phenomenology ka Husserl kanye imibono ukuthi alala kwesisekelo salo, ezibekwe emibhalweni "Uphenyo enengqondo", "Imibono ka phenomenology okumsulwa kanye nefilosofi phenomenological", "Philosophy njengoba isayensi azinabo" nezinye imisebenzi, lapho isazi sefilosofi uchaza imiqondo logic nefilosofi, nezindaba zesayensi kanye nezinkinga ulwazi. Iningi imisebenzi wesazi sefilosofi ingatholakala ukuhumusha Russian.
Husserl babekholelwa ukuthi kwakudingekile ukuba ukuthuthukisa indlela entsha, kunalowo eyingoduso ngaleso sikhathi. Ingqikithi yalo indlela entsha kwaba ukuze ubuyele izinto futhi ukuqonda ukuthi yini izinto. Ngokusho umbono isazi sefilosofi sika, kuphela incazelo ngezehlakalo (izenzakalo), avele Komuntu, kungasiza ukuqonda izinto. Ngakho, ukuqonda kanye ukuqonda kwabo, omunye kumelwe uqaphele "Inkathi" ukuze ubakaki imibono nezinkolelo zakhe ngesimo yemvelo, okuyinto umnika ngenkani ukholo abantu ukuba khona kwezinto emhlabeni.
I phenomenology ka Husserl kusiza ukuqonda okushiwo zinto, kodwa hhayi namaqiniso, akanandaba ethile kuyinsakavukela zokuziphatha noma ukuziphatha, wayezibuza ukuthi kungani leli lungiselelo akuyona. Ngokwesibonelo, ukufunda amasiko enkolo ethile, kubalulekile ukuqonda ukuthi inkolo ngokuvamile, ukuze baqonde essence yayo. I phenomenology into, ngokuvumelana sefilosofi kuyinto kombuso nezincazelo okumsulwa futhi iqiniso. Husserl ubhala ukuthi phenomenology - iyona ifilosofi lokuqala, isayensi izisekelo okumsulwa kanye nezimiso elwati ukwazi, kuyimfundiso yomhlaba wonke.
izitatimende sefilosofi abonisa ukuthi phenomenology ka Husserl (kafushane kulotshiwe iyiphi yephuzu nefilosofi) yakhelwe okuguqula nefilosofi ibe isayensi esiqinile, okungukuthi imfundiso yokuziphendukela ulwazi, okuyinto wakwazi ukunikeza sicace nezwe elingaphandle. Esebenzisa ifilosofi entsha ingatholakala ulwazi oluthe xaxa, kuyilapho nefilosofi ubudala wayengakwazi kuleli zinga ukujula. Husserl babekholelwa ukuthi amaphutha ifilosofi emidala zaholela ezinkingeni isayensi European nempucuko. Inkinga Isayensi kubangelwa yokuthi ekhona nenqubo yesayensi Akasekho esebenza, nokuqonda zezwe futhi izwe ukuze yafuna ushintsho.
phenomenology Husserl libuye lithi umhlaba kuphambene ifilosofi nesayensi, futhi abafuna ukuletha akulungise. Isifiso ukuzinza zokuphila sekukhona Kudala eGrisi lasendulo futhi ngavula esintwini ngendlela infinity. Ngakho, isazi sefilosofi uhlongoza ukuzibandakanya kumsebenzi bokusungula, funa imithetho lula umkhuba nolwazi. Kuyinto ngenxa nefilosofi, wacabanga umbono ukwakha emphakathini. Njengoba ubona, the phenomenology ka Husserl - hhayi ocatshangelwayo lula, kodwa imibono yayo ezakhiwa ngemisebenzi M. Scheler, Heidegger, GG Shpet, Merleau-Ponty nabanye.
Dionisiy Areopagit, "Celestial Umkhakha". ONgcwele Dionisiy Areopagit
Rationalism - Lona ube nombono ohlakaniphile
Dreiser - sotsiotip ezithakazelisayo, nakuba kunzima
Isikhathi okusha: ifilosofi isizathu nesipiliyoni
Ungobekelwe emaceleni - yisici esingokwemvelo kunoma yimuphi umphakathi?
U-Aristotle, Ifilosofi kafushane ecacile. eziyisisekelo
Ukwaluka kuze kudabuke umhlane. izindwangu zokuhlobisa ngezandla zabo
ULeo no-Aries uthando ukuhambisana futhi ngokocansi
Kuyini "Domostroy"? "Domostroy": umbhali, ngonyaka sokudalwa, isifinyezo
Umcamelo-basanga ngezandla zakhe: iphethini, isithombe
Isazi-mlando saseRashiya nesombusazwe u-Yuri Afanasyev
Sleepwalking ezinganeni. Siyini isizathu?
Visa ukuze Malaysia: izici design. visa isikhungo
"Psorilom" - imoto itiyela: Izibuyekezo
Emagumbini yangaphandle Tile: izinhlobo, izindlela emakhiyubhi
Siphendula: siyini ukukhohliswa nokupheka